PressReader - Ilanga: 2018-07-12 - Usizi kubhubha izelamani (4) engozini yemoto
Usizi kubhubha izelamani (4) engozini yemoto
Kushone nezingane zakwamakhelwane
Ilanga - 2018-07-12 - Front Page - NOMFUNDO NGWANE nomfundo@ilanganews.co.za
SIMUNCU isimo emndenini wakwaJali, eNyandeni, eHarding, emuva kwengozi yomgwaqo enyantisa igazi eyenzeke ngoLwesihlanu ebusuku yadlula nezelamani zawo ezine.
ILANGA lithole ukuthi kulesi sigameko kushone uMinehle Jali, uNdumiso Jali, uTsala Jali, uSamkelo Jali, uMlondi Ntuli noPhelelani Sihlophe nomunye wesifazane okuthiwa ubesemotweni - eligcine lingatholakalanga igama lakhe.
UMnu Zamukulunga Jali, onguyise wezelamani zakwaJali, azizala kumama oyedwa - okumanje usele nengane eyodwa - uthi ufe olwembiza ngamadodana akhe abekhombisa ukuba nekusasa eliqhakazile njengoba ebeyithanda imfundo.
Uthi imoto ebehamba ngayo ishayisane neloli, bashona bonke abebesemotweni. Utshele ILANGA ukuthi indodana yakhe encane, uMinenhle, ibihamba nomngani wayo wakwamakhelwane bephuma eThekwini lapho befunda khona.
Uthi bafike edolobheni eHarding bamfonela, bamtshela ukuthi izimoto zokuhamba eziya ekhaya seziphelile kodwa basazofonela abafowabo bezwe ukuthi bangakuphi ukuze bacele bona ukuba babahlangabeze.
“Ngithole ukuthi bafonele omunye wabafowabo obehamba ngemoto, bacela yena ukuthi abalande edolobheni. Besendleleni ebheke ekhaya sebehamba bonke, bahlangabezane nale ngozi,” kusho uMnu Jali.
“Bengingenalo ngisho ulwazi ukuthi bayabuya eThekwini, ngize ngathola ngoba sebengifonela bengitshela ukuthi bahlwelwe edolobheni. Bekuyizingane ezilungile lezi, ebezisencane, zinekusasa eliqhakazile.
“Omunye umfowabo ubengisiza sakha umuzi omusha njengoba ebekwazi nokushayela. Bengithuma yena njengoba sengihleli ekhaya. Ngife olwembiza ngamadodana ami nabangani bawo abangomakhelwane,” kusho yena.
UMnu Bongumusa Sihlophe, ongumfowabo kaPhelelani, uthi umfowabo ubesanda kuthola itoho lokwakha izindlu esiza umfana wakwaJali. Uthi le ngozi ibehlele bebuya etohweni labo eSantombe, sebegoduka.
“Ngibuhlungu ngokudlula emhlabeni kukamfowethu oshiye ingane encane,” kusho uMnu Sihlophe. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Thulani Zwane, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi amaphoyisa aseqale uphenyo ngokushona kwalaba. Kuvulwe icala lokubulala ngokungenhloso.
Bengingenalo ngisho ulwazi lokuthi bayabuya eThekwini...